Zvinhu Zvose Zvaunoda Kuti Uzive NezveAnadrol (Oxymetholone) ye Bodybuilding
Kushandiswa kwevanabolic steroid inoramba ichiita misoro yemitambo semashambadziro uye vatambi vanovashandisa kuti varambe vari muchikwata chepamusoro. Vazhinji vashandisi vanotora steroid iyi yekuita-kukurudzira uye kusimba-simba mune tariro yokuti vanozosimudzira mano avo ekusimudza zviremera zvakanyanya, kuwedzera mberi, kumhanyira nokukurumidza, kana kukwira kumusoro. Kana uri kunze kutarisa steroid anabolic iyo ichakubatsira kuti uite zvose izvi, unofanira kufunga kutenga Anadrol (Oxymetholone).
1.Chii Anadrol (Oxymetholone)? Chinoshanda sei?
Anadrol (434-07-1) inonzi steroid yemuromo iyo ndeyeboka remishonga inozivikanwa sevanabolic steroid uye iri ndiro zita reOxymetholone. Iyo yakabva kuDihydrotestoterone, uye inoonekwa seimwe yeiyo inobatsira vanabolic androgenic steroids (AAS) pamusika nhasi. Iyi steroid inowanikwawo zvakare seAnadrol 50, iyo inowanzoreva kuti yakaiswa pa 50 mg piritsi / tablet.
Oxymetholone (434-07-1) ndiro zita reAnadrol uye zita remakemikari ayo 17ß-hydroxy-2- (hydroxymethylene) -17-methyl-5a-androstan-3-imwe. Izvi zvinotevera zviya zvayo:
Nhamba yakaneta - 178 ° kusvika 180 ° C
Kushanda zvakagadzirwa - Oxymetholone
Zvisingabatsiri zvigadzirwa - magnesium stearate, lactose, starch, povidone
Kufanana nedzimwe vana anabolic androgenic steroids, Oxymetholone isagonist ye-androgen receptor. Iyo mishonga haisi iyo substrate ye 5a-reductase uye inorasikirwa substrate ye3a-hydroxysteroid dehydrogenase. Nokuda kwechikonzero ichi, Oxymetholone inoratidza huwandu hwakawanda hwevanabolic kumabasa e androgenic, iyo 320: 45. Izvi zvinoreva kuti iyi yakagadzirwa steroid ine simba anabolic zvinokonzera uye yakaoma uyerogenic effects.
Nhoroondo yeOxymetholone inodzokera kumashure ekutanga kwe1960s, apo kuongorora kwemazuva 30-kubatanidza rubatsiro varwere vakanga vachirwara nemasisita kupera kwakaitwa. Pakupera kwekudzidza kwenguva, varwere vakange vawana mavhareji emakiromita gumi nemana.
Vanhu vakatanga kuendeswa kune Oxymetholone mupepanhau re1956. Yakanga iripo kusvika ku1961 apo Syntex uye Imperial Chemical Industries vakaunza mushonga kumusika wekurapa muUnited Kingdom pasi pezita rainzi Anapolon. Hazvina nguva refu varimi vemuviri vakawana mhepo yechirwere ichi nekuda kwekubatsira kwayo kubatsira vashandi kuwana misi.
Zvichiri mukutanga kwe1960s, Oxymetholone yakaiswa kumusika weAmerica uye dzimwe nzvimbo dzenyika. Yakatengeswa pasi pemhando dzakasiyana-siyana dzezita, kusanganisira:
Anadrol anoshanda sei? Zvakanaka, ichi chinodhaka chinounza zvinhu zvakawanda kune tafura yemuumbi. Chokutanga, iyo inoshandiswa inoshandiswa, Oxymetholone, inogadzira mahomoni ekugadzira zvakadai sa testosterone. Muviri wako unobereka testosterone zvakasununguka, asi haikwanise kufanana nekubudirira kwe steroid pakubudisa testosterone. Anadrol inowedzera zvimwe zve testosterone zvakakurumidza kupfuura muviri wako. Mushure mokunge watanga kutora steroid, iwe uchakwanisa kubudirira zvikuru mukusimba, musimba uye kukura pedyo nokukurumidza.
Inowedzera nitrogen kuchengetedza uye protein synthesis. Nokuita kudaro, inoumba nzvimbo yakanakisisa yekusimudza musimba. Anadrol inowedzerawo chido, icho chinhu chakanaka kune avo vanotarisira kuona zvakakosha kuwana.
Chimwe chezvinhu zvinogadzirisa Anadrol kunze kwevamwe vana vanabolic androgenic steroids ndiko kukwanisa kwayo kukurudzira kushandiswa kwemasero eropa. Izvi zvinoshanda nekuwedzera huwandu hwe erythropoietin hormone, iyo inobatanidzwa mukugadzirwa kwemasero matsvuku eropa. Inopinda mumasero emagetsi uye inokurudzira kugadzirwa kwehomoni, iyo inosunungurwa muropa. Iyo hormone inotenderera ichipoteredza muviri uye inoshanda pamapfupa emasera masero kuti atange masero matsvuku eropa. Izvi ndizvo zvinoita kuti zvibudirire pakurapa chirwere chemahyamu.
Kukwanisa kweAnadrol kuwedzera kukura kwemasero eropa kunobatsirawo mukusimudzira mitambo. Apo nhamba yemasero matsvuku eropa inowedzera uye inopararira kumativi ose mumuviri, huwandu huwandu hweokisijeni hunoendeswa kumisungo. Izvi zvinoita kuti uwedzere simba panguva yekushanda, zvichiita kuti iwe uite zviri nani mukurovedza muviri.
2.Anadrol (Oxymetholon) Zvishandiso
Kune akawanda Oxymetholon inoshandisa. Chokutanga, steroid iyi inobatsira chaizvo mukusimudzira musimba kukura nekuwedzerwa kwekureruka, kunyanya nekuvandudza zvikuru mapuroteni synthesis. Inotaridzika seimwe yeiyo yakanakisisa vanabolic steroids pakuwedzera kuwanda kwemasero matsvuku eropa nekuchengetedza majoints panguva yekushanda zvakaoma kana pasi pemitoro inorema. Nokuda kwezvikonzero izvi, inowanzoshandiswa pakuita zvepanyama uye kushanda-kukurudzira nevatambi vemakwikwi, mizimba, uye powerlifters.
Kunze kwekuzivikanwa nekubudirira kwayo pakunatsiridza muviri nekushanda, Anadrol inonzi ndeimwe yezvakasimba uye ine simba uyerogen anabolic steroid inowanikwa mukurapa. Zvinyorwa zvekuchirapa zvinoshandiswa zvechirwere zvinosanganisira kurapa kweasteoporosis uye chirwere chekushaya ropa. Chirwere ichi chinoshandiswawo kubata chirwere chinonzi angioedema, HIV / AIDS kuparadza syndrome, pamwe nemamwe marudzi echepamu rehadzi muvakadzi.
Pamusana pekukwanisa kwayo kukurudzira kuwedzera, Anadrol inoshandiswawo kubatsira vanoshayiwa zvokudya vasingakwanisi kuwandisa mushure mekukuvadzwa kwakakomba, chirwere chakakomba, kana hutachiona hunoramba huripo. Vana vasina kusimba nevarwere vanokundikana kuchengetedza uremu huripo nekuda kwezvikonzero zvisingaverengeki zvezvechirwere vanogonawo kubatsirwa nekurapa uku.
Oxymetholone iri pakati pevamwe vanabolic androgenic steroid inoramba ichishandiswa kurapwa muUnited States. Kungofanana nedzimwe sangano reAAS, Anadrol iri purogiramu III inodzora zvinhu muUnited States pasi peMutemo Wemasimba Akadzora.
3.Anadrol (Oxymetholon) Dosage
Anadrol inogona kutarisirwa nenzira mbiri: mumuromo uye kuburikidza nekujowa. Mahwendefa eOxymetholone omumuromo anowanikwa mumabhodhoro ane 100 white akawana mapiritsi. Paunotora Anadrol mumuromo, iyo yakanaka zuva rega rega Oxymetholone muyero nokuti vatambi vechirume ndeye 1-5mg ne kilogram yehutatu hwemuviri. Inonyanyozivikanwa Anadrol (Oxymetholone) muyero ndeye 50 mg pazuva. Kana muviri wako unogona kuzvigadzirisa, hapana dambudziko rekuwedzera mahora ako Oxymetholone zvishoma nezvishoma kune 100 mg pazuva.
Icho chinonyanya kukosha kuti chero mupi wega angada kushandisa zvinopfuura 100 mg yaAnadrol pazuva. Kutaura zvazviri, kutora zvinopfuura 100 mg pazuva hazvidiwi. Kutora mizinga yeOxymetholone yepamusoro kunogona kukonzera mune mamwe madhigirii eOxymetholone pasina kuwedzera kuwedzerwa kwemigumisiro yako yakawanda.
Vamwe vashandisi vanofungidzira kuti injectable Anadrol inoguma mune zvakanyanya kufanana nemisumbu nekuda kwekuti inopararira chiropa uye inopinda zvakananga mumutsara weropa. Zvisinei, steroid iyi inonzi c17-alpha alkylated mishonga, iyo inoreva kuti haina kuputsika nechiropa. Nokudaro, chikamu chikuru kwazvo chesimbe yakasimba inoita kuti iwane ropa rakaita nenzira imwecheteyo injectable Anadrol. Aya ndiwo mashoko akanaka kuvashandisi vazhinji nekuda kwekushandisa nyore nyore kutora mapiritsi eAnadrol, kusiyana nekupinza mushonga nguva dzose.
Nemhaka yehutano hwakasimba kwazvo, huwandu hwayo hwehutano hwehutano hwakakosha uye huwandu hwehutachiona hwehupenyu huripo (kukura kwevanhu vanhu hunhu), Anadrol haina kukurudzirwa kuti ishandiswe nevakadzi. Sezvo zvakadaro, pane zvishoma zvishoma zvekutungamirira mazano ekushandisa kwevakadzi kusarudza kwekusimudzira muviri nekuvandudza kushanda.
Chii chinoitika kana iwe uchinge usiri kurasikirwa? Iwe unofanirwa kutora chirwere chaAnadrol chisingakanganisi pakarepo iwe uchiyeuka. Kunyange zvakadaro, kana iri nguva yeiyo inotevera, iwe unofanirwa kutsika chirasi chakakanganisika uye udzoke zvakare yako dosing schedule. Usambofa uchitora diti mbiri. Kushandiswa kwako kweOxymetholone kunofanirwa kuve kusingagumi kuitira kuti uwane zvido zvaunoda.
Zvinopera pasina kutaura kuti kunyanya kuderedza steroid kunogona kuva nengozi zvikuru. Kufanana nedzimwe steroids, kudarika kweAnadrol kunogona kukuvadza hutano hwako. Zvichida Anadrol nemigumisiro inokonzerwa nekudarika kwekare kunosanganisira kurwadziwa kwepfungwa, kushaya mwoyo, uye mafungiro ekufuratira. Uyewo iva nechokwadi chokuti hauna matambudziko ehutano usati watora Anadrol kana chero imwe vanabolic steroid.
Zvakakosha kutora Oxymetholone nekuchengetedza kunodzivirira kubatana kwechirwere ichi muhutano. Zvakakosha kutaurirana nachiremba nezvekushandiswa kwechirwere ichi kuti uone kuti yakachengeteka iwe kuti ushandise.
4.Anadrol (Oxymetholone) Purogiramu
I-anabolic michina ye steroid iyi inoita kuti ive sarudzo yakanakisisa yekugadzirisa maitiro uye simba rakatenderera. A typical Oxymetholone cycle inopera pakati pe4 kusvika kumavhiki e6, uye inogona kushandiswa kwenguva yakazara yehupenyu. Pane nzira dzakasiyana-siyana dzaungagona kuisa Anadrol mumutambo.
Iwe unogona kuishandisa kuti utange kutanga kuputika
Iwe unogona kuishandisa sepakati pepakati bhiriji. Unogona kuishandisa zvakare kusvika kumagumo ekufamba kwako.
Kunyange zvazvo Anadrol isiri sarudzo yakanaka yekucheka, iwe unogona kuishandisa kusvika kumagumo ekucheka kwechikafu sezvo kubwinya kwayo kwakakura kunobatsira kudzivirira kurasikirwa kwemaviri mashoma.
Maererano nekuongorora, Anadrol haatauri zvakawanda maererano nekutora kana kuora kwekureruka, asi kana zvasvika pakubhadharira, steroid iyi isiri yega. Vakawanda vanogadzira muviri vanotora Oxymetholone munguva yechando, apo kuwedzerwa kwemaviri emumiro kunokosha kupfuura aesthetics.
Kana inosvika kuzhizha kana kana iri pedo nemakwikwi, varimi vemuviri vanowanzobva pamishonga sezvo ichikonzera kuchengetedza mvura. Nokudaro, chirongwa ichi ndechekuwedzera musimba mushure memwaka, uye edza kubatisisa kune huwandu huwandu kana mumwe achida kutarisa zvakanakisisa. Panguva iyoyo, mamwe steroid anocheka akadai seotbolone kana anavar anogona kuiswa.
5.Anadrol Oxymetholone Mhinduro
Anadrol ndeimwe yevanabolic steroids nenguva inokurumidza yekuita. Kuva musimba ane simba, Anadrol inoguma mukushandura kwemuviri uye kunorumbidzwa. Ruzhinji rwe Oxymetholone migumisiro inoonekwa mukati memavhiki matatu okutanga.
Vashandi vanogona kuwedzera anenge hafu ye kilo pazuva mumavhiki mashomanana ekutanga. Bodybuilders vanoshandisa iyo vanotaura kuti vakawana 30 + mapaundi mumavhiki mashoma kana matanhatu. Nezvakanakisisa zviitiko zveOxymetholone, kudya kwakakura mumakoriri nemapurotini kunodiwa neyiyibolic steroid ino.
Zvakakosha kuziva kuti mushumiri wese anopindura Anadrol zvakasiyana. Kazhinji, kana iwe usati wamboshandisa chero vanabolic steroid kare, 50 gm zuva rega rega Oxymetholone muyero wevhiki ya 3-5 ichakupa zvakanakisa kuwana, asi zvichikubatsira iwe kuvaka shungu ye steroid. Kana uchinge wakasununguka pane chirongwa che 50 mg, unogona kuwedzera purojekiti yako yeOxymetholone kuti urambe uchinge uchinge uchinge uwandisa.
Paunenge uchitamba, Anadrol achakupa simba uye kutsungirira kuenda mberi nekukurumidza kupfuura kare. Izvo simba rakawedzerwa raunowana richakubatsira iwe kuva nemasumbu makuru uye kusimudza zviremera zvakaremara. Mumavhiki mashomanana, iwe uchava nemuviri unongotarisa hukuru, asi unoshandawo zvakakwana.
Oxymetholone hafu yeupenyu inenge maawa 16. Kunyange zvakadaro, nguva yenguva iyi mishonga inoramba iri mumuviri inogona kusiyanisa zvishoma kubva kune mumwe mudzidzi kuenda pane imwe. Nehafu yechipfuva-hupenyu, hazvidiwi kuti uite muitiro weplit-dose ne steroid iyi. Imwe 50 mg piritsi inotorwa kamwe chete pazuva (zvichida mangwanani) inofanira kukwana kuchengetedza mazinga eropa plasma akachengetedza zuva rese.
Zvisinei, vamwe vashandisi vanosarudza kunamatira kumapurogiramu echipatara, apo vanotora dose mangwanani uye mumwe anoita asati avata. Kuparadzanisa maitiro eAnadrol muviri hakuzombokonzeri dambudziko, uyewo hazvizoiti zvakakosha zvakakosha. Steroid inowanzoramba ichinyatsoonekwa kwemavhiki masere e8.
7.Anadrol (Oxymetholone) Kubatsira
Kune huwandu hwehuwandu Oxymetholone inobatsira izvo zvinouita sarudzo yakasarudzwa nevakawanda vomuviri, vatambi uye powerlifters. Izvozvo zvinosanganisira:
(1) Mhinduro dzinokurumidza
Anadrol inozivikanwa nokuda kwekune simba zvikuru uye yekuita nokukurumidza. Vazhinji vashandisi vanotaura kuti vakawana 10-30 lbs mumavhiki avo ekutanga mana kusvika mashanu ekutora mushonga. Izvi zvinorevei kuti iwe unogona kuenda kubva paganda kana kuvhara kusvika kune yakakura zvikuru mumakore mashoma ari pasi pe2.
(2) Inokurudzira zvakanyanya kuwanda kwevanhu
Paunoshandisa Anadrol, iwe ungangodaro unoona zvakakomba mashoma mukati memakore mashoma. Mune chimiro cheOxymetholone chinogara pakati pemavhiki mana kusvika matanhatu, unogona kuwana chero kupi zvako kubva ku20 kusvika ku30 mapaundi.
Mushonga unowana chimiro cheyi anabolic androgenic steroid inozivikanwa muhukama hwehutano, ndicho chikonzero chirwere chacho chinowanzogadzirirwa kurapwa kwemasispiti atrophy, pamwe chete nekurapa kwechirwere chenguva inonzi diitysisal dialysis. Kana yakashandiswa kurapa maitiro aya, steroid inobatsira varwere kuwana hutonda hutsika hutsika.
(3) Inokurudzira simba
Kana iwe uchiramba uchitora chirongwa chakakodzera cheOxymetholone, unenge uine simba guru munguva shoma. Vamwe simbalifters vanorondedzera kuti vakave nekuwedzera kwe40lbs mukombedhi inokwidza pasi pemashure makumi matatu. Kune huwandu hwezvidzidzo izvo zvakatsvaga zvinoitika zveAnadrol pamasimba uye zvakawana steroid inobatsira zvikuru pakuwedzera simba. Vazhinji vane simba vanofambisa steroid kuti vawedzere simba ravo apo makwikwi ari pedyo.
(4) Inokurudzira kutsungirira
Kana iwe kazhinji uchinzwa wakaneta wakaneta mushure mokushanda kwemaminitsi mashomanana, kutora steroid iyi ndizvo zvaunoda kuti uwedzere kushanda kwako. Kubva pamagumisiro eAnadrol mukugadzirwa kwemasero matsvuku eropa, kutora steroid iyi inogona kukubatsira kuti uwedzere kushushikana kwako kwemuviri. Izvi zvinoreva kuti iwe uchakwanisa kuita zvakanyanya weightlifting workouts kwechinguva chiduku pasina kusakara.
(5) Inobatsira kurasikirwa kwemafuta
Nekuvandudzwa kwekushanda, simba rakawedzerwa uye kutsungirira kunowedzera pakurovedza muviri, kurasikirwa nemafuta kunova nyore sezvinonzi 123. Saka, kutora Anadrol kuchakubatsira kuti udire mafuta asingadiwi uye uite kuti iwe uite musuru panzvimbo.
(6) Inokubatsira kuti uwane nokukurumidza
Chimwe chekunyunyuta kunowanzoitwa nevatambi vakawanda uye miviri yekuti muviri yavo inowanzodikanwa kupedza mazuva mashomanana kuti vadzore shure mushure mekushanda kwakasimba. Zvinosuruvarisa, vadzidzisi vemuviri havawanzove nehuwandu hwekushandisa nguva yekuzorora nekuporesa pavanenge vane vavariro huru dzekuwana.
Kana iwe kazhinji uchinzwa sokuti uri kupedza nguva uchimirira muviri wako kuti upore kuitira kuti ugone kurova gymzve, iwe uchashamiswa nekukurumidzira iwe uchakwanisa kudzorera shure kana iwe uwedzere Anadrol pane regimen yako yekushandira. Anadrol ine unyanzvi hukuru hwekugadzirisa manotsi ako nemisungo, saka zvinokubatsira kuti upore uye upore nokukurumidza.
(7) Inobatsira kudzivirira kukuvadzwa kune majoini
Inopa mazinga ekuchengetedzwa kune vashandisi nenzira yekugadzirisa majoini kuitira kuti kuwedzerwa kuwedzerwa. Izvi zvinokonzera iyi anabolic androgenic steroid inofanirwa mberi kwekushanda steroid sezvo ichichengetedza mishonga yako uye inodzivirira pectoral yako uye biceps tissue kubva kuputika panguva yekusimudza zvakasimba. Saka, Anadrol haisi kungotapedza ngozi yekukuvadza paunenge uchisimudza masero akaremara, asi inowedzerawo marwadzo pamwe chete anowanzosangana panguva yekudzidzira kunetsa.
(8) Inoderedza SHBG
Testosterone imwe yezvivako zvakakosha zvekuvaka izvo zvinobatsira muviri wakawanda uye simba. Kungofanana nezita rayo rinoratidzira, kurara kwehomoni inosunga globulin ndeye globulin inoda kuzvisunga pa testosterone. Kana imwe nguva ichizvisunga pa testosterone, inodzivirira hormone yepabonde kuita basa rayo zvakanaka. Kutora Anadrol kunobatsira mupfungwa yokuti inoderedza basa reS SHB mumutumbi, zvinoita kuti testosterone iwedzere libido uye iwedzere musimba mashoma.
(9) Inogona kuiswa
Anadrol inogona kuchengetedzwa zvakachengeteka neine vanabolic steroids. Vakawanda vanogadzira muviri vanowedzera steroid kuhomwe yavo yekunyora nemhaka yekukwanisa kwayo kukurumidza kuwanikwa. Kunyange zvazvo kuvhara kwega kwega kunogona kuita kuti pfungwa dzive nemigumisiro, Anadrol inogona kutora zvinhu kunyange nechechi chakakwirira. Anadrol mashavha anobudirira zvikuru kune vashandi mukuwana simba uye simba.
Anadrol neWinstrol stack ndeimwe yezvisarudzo zvakasarudzwa zvikuru sezvo ichipa mhinduro yakasimba uye inobatsira nemasimba asinganzwisisiki. Anadrol neTesttosterone Enanthate stack inonzi inonyanya kushandiswa inowedzera maitiro e testosterone uye inodzivirirawo migumisiro yechirwere nekudhara. Trenbolone naAnavar kune dzimwe steroid vanabolic inogona kuiswa pamwe neAnadrol.
Zvakakosha kuziva kuti kubudirira kwekuchengetwa kwezvikwereti kunobva kune marudzi emashizha anoshandiswa. Uyewo, kuoma kwemigumisiro yeOxymetholone kunogona kuderedza kana kuwedzera zvichienderana nerudzi rwe steroid unosarudza kuvharana neAnadrol.
Kutaura nevashandisi veAnadrol, iwe uchabva waziva kuti yakakurumbira sei anabolic steroid. Zvinoratidzika seine simba rakanaka kune vazhinji vevaya vanoishandisa. Vazhinji vashandisi vanoita sevanokurudzirwa pamusoro pemigumisiro uye vanofara kutaura pamusoro pekukurumidza sei steroid iyi anabolic inovabatsira kuti vawane zvinangwa zvavo.
Zvizhinji zve Oxymetholone kuongororwa zvinoratidza kuti Anadrol zvechokwadi anoita izvo zvinoshandiswa nokuda. Mushure memasvondo e4 pamusangano weAnadrol, vazhinji vashandisi vanowanzotaura kuti vakawedzera pamusoro peA12 mapaundi emasimbi musimba mumuviri wavo. Kunewo vazhinji vashandisi vanoti vanowedzera simba kupfuura kare. Vazhinji vashandisi vanogonawo kuwedzerwa kuyerwa kwemasimba avo makuru (bench press, vakafalift, uye squat) kusvika kusvika gumi nemashanu kubva mumwedzi mumwe chete.
Kunewo chikamu chevashandi vanoona Anadrol kuva gentler akafananidzwa ne Dianabol, asi inopa zvakaenzana zvakanaka kubudirira maererano nemasimba uye mashoma. Vashandi vanoti kubva pazuva rechitatu zvichienda mberi, munhu wese akavapoteredza akaona mitezo yakaoma uye yakazara. Mitsetse yakanga isinganzwisisiki zvakare.
Kana vari vashandisi vakawedzera Anadrol kumagariro avo ekucheka, vanoti steroid zvechokwadi inouraya chido chavo. Runako rwechikamu chacho ndechokuti inoderedza chishuvo chako asi iwe hausi kuzove wakanyanyisa kuderera.
Kunyange zvazvo vakawanda vashandisi vaudza kuti vakawana zvibereko zvakanaka naAnadrol, kunewo avo vakamboti mimwe migumisiro, iyo inowanzonzi ne steroid. Iyo yakawanda inonzi yakasvibiswa neOxymetholone madhara ndeyi:
9.Anadrol (Oxymetholone) inotengeswa
Anadrol iyi yakagadzirwa anabolic-androgenic steroid iyo inoshandiswa pasi rese nevashambadziri vanoda kuvaka musuru uye kuwanda mukati memwaka. Zvisinei, steroid iyi inowanzova yakaoma kuwana munzvimbo nekuda kwemiganhu yepamutemo. Mashoko akanaka ndeokuti pane vatengesi vakatendeka veAnadrol, kana iwe uchiziva kuti ungatarisa kupi.
Hama, shamwari, kana kunyange vashandi pabasa vanogara vachiita basa rekuvaka muviri vanogona kuziva nenzira imwechete vakashandisa Anadrol. Iwe unogona kuwana maitiro makuru emushandisi uye kuwana mazano ekuenda kunotenga Anadrol.
Kana iwe usingadi kupinda mumatambudziko ekubvunza kumativi ose, pane nzira iri nyore - kutenga Anadrol online. Munenge zvose zvinotengwa mumutambo mumazuva ano uye anabolic steroidasi hazvisi izvo chete. Iwe unogona nyore uye unotenga kutenga Anadrol online kubva kunyaradzo yeimba yako. Izvi zvichakuchengetedza nguva nekutambudza sezvo iwe unogona kuraira mari yaunoda uye kuti iendeswe pamba pako pamusuo mumazuva mashoma.
Paunogona kuwana Oxymetholone inotengeswa pane nzvimbo dzakawanda dzakasiyana, zvinokosha kuti iwe chete Tora Oxymetholone powder chete kubva panzvimbo dzinovimbwa. Buyass.com ndeimwe yenzvimbo dzakavimbika uye dzakavimbika dzinotengesa chaiyo Oxymetholone pamutengo wakakodzera.
Mutengo50 x 50 mg mapiritsi eAnadrol anofanira kutarisa pakati pe $ 60 ne $ 100 muUnited States uye pakati pe £ 40 ne £ 60 muUnited Kingdom. Ngwarira nzvimbo dzinotengesa Anadrol pamutengo unopesana nezvakawanda kubva mumatunhu aya.
Pashure pokutenga Anadrol uye nekuita zvakakunakira, iwe hazvizogoni kumira ipapo. Kungofanana nevashandisi vakawanda, iwe unoda kuedza dzimwe steroids. Kana iwe ukwanisa kuwana muchengeti anotengesa steroid yakasiyana, iwe uchazviponesa nguva. PaNotass.com, uchawana steroid yakawanda, kusanganisira kubvongodza uye kugadzira zvigadzirwa zvinogona kukubatsira kuburikidza nehupenyu hwako hwose rwendo.
Pane zvikonzero zvakanaka zvekushandisa Anadrol. Pasinei nokuti chinangwa chako ndechekuvandudza simba shoma raunayo, kana iwe unoda kuwana nzira yekukurumidza kuwedzera, iyi anabolic androgenic steroid inogona kukubatsira. Tora Anadrol uye usakanganwa kuisa zvinangwa zvitsva iwe pachako nokuti izvo zvawakatotadza ndezvechokwadi kuti vauya pasi pasi chaizvo munguva pfupi.
1. Saartok T, Dahlberg E, Gustafsson JA (1984). "Kuwirirana kunobatanidza hukama hwevanabolic-androgenic steroids: Endocrinology. 114 (6): 2100-6.
2. Pavlatos AM, Fultz O, Monberg MJ, Vootkur A, Pharmd (2001). "Ongororo ye oxymetholone: Clin Ther. 23 (6): 789-801, kukurukura 771
3. Zderic, John A .; Carpio, Humberto; Ringold, HJ (January 1959). Nyaya yeAmerican Chemical Society. 81 (2): 432-436.